.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Mp3 သီချင်းများ ဒေါင်းရန် ၃
1 ဒိုင်ယာရီ လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
2 နှလုံးသွေးများရပ်တန့်သွားပါစေ လေးဖြူ ၊ ဂျက်မြသောင်း Click Here 2.00 MB
3 ရုပ်သေးရုပ် သားကြီး Click Here 2.00 MB
4 အချစ်တွက်ကိုယ်စား ဟဲလေး Click Here 2.00 MB
5 ခေတ္တအဝေး Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
6 နင်ပျော်မယ်ဆို ဆိုတေး ၊ Demo Jacktoo Click Here 2.00 MB
7 တစ်စုံတစ်ရာ ဂျေမောင်မောင် Click Here 2.00 MB
8 ရေချိုးဆိပ် ဝင်းဦး Click Here 2.00 MB
9 ကျွန်တော်နှင့်ပန်းပွင့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.00 MB
10 အဆုံး ဇော်ဝင်ထွဋ် Click Here 2.00 MB
11 ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေ လွှမ်းပိုင် | Bobby Soxer Click Here 2.00 MB
12 မငိုပါနဲ့ ပိုပို Click Here 2.00 MB
13 မာယာ လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
14 အရက်သမား ( နေညိုပြီ ) ဖော်ကာ ( Wanted ) Click Here 2.00 MB
15 မ မချစ်လို့မဖြစ် Bunny Phyo ၊ ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
16 သတ်လို့မသေတဲ့အချစ် Jk San Click Here 2.00 MB
17 ရှင်နော် တွင်ကယ်လ် Click Here 2.00 MB
18 မမသီရိ ဆိုတေး Click Here 2.00 MB
19 ဖန်သားနန်းတော် Black Hole Click Here 2.00 MB
20 အမုန်းမြို့သူ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ft.Snare Click Here 2.00 MB
21 အထီးကျန် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.00 MB
22 No More Cry ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
23 သတိရညနေခင်း ရဲလေး ၊ ဇေရဲ Click Here 2.00 MB
24 သံယောဇဉ် လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
25 လျို့ဝှက်ထားတယ် ရဲလေး Click Here 2.00 MB
26 ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ( ၁ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
27 ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ( ၂ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
28 ဘယ်သူကိုယ့်လောက်ချစ်သလဲ ဖြူဖြူကျော်သိန်း Click Here 2.00 MB
29 မေမေဆူလိမ့်မယ် နန်းဆုရတီစိုး ၊ ဘာဘူ Click Here 2.00 MB
30 ညှိ့နိုင်လွန်းတဲ့ကျွန်မချစ်သူ ချမ်းချမ်း Click Here 2.00 MB
31 နောက်ဆုံးပဲလား Idiots Click Here 2.00 MB
32 ကြည်နူးခွင့် မေစပါယ်ညို Click Here 2.00 MB
33 အရံလူ ရင်ဂို Click Here 2.00 MB
34 ချစ်လို့ မာရဇ္ဇ Click Here 2.00 MB
35 ငါ့ဘက်က မှားတာပါ လင်းလင်း Click Here 2.00 MB
36 မျက်နှာလွှဲ Bunny Phyo ft. Ki Ki Click Here 2.00 MB
37 ဖက်တီးမ ဆိုတေး Click Here 2.00 MB
38 ကျေးဇူးပါမေမေ ဖိုးကာ Click Here 2.00 MB
39 နေညိုရင် လင်းနစ် Click Here 2.00 MB
40 အချစ်ဝေး လင်းနစ် Click Here 2.00 MB
41 အချိန်မီသာ ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိခဲ့ရင် မျိုးကြီး Click Here 2.00 MB
42 မျောက်ဖြစ်ချင်တယ် ဟန်ထူးလွင် Click Here 2.00 MB
43 မွေးမေကျေးဇူးဆပ်ဖူးချင်တယ် ဟင်္သာတထွန်းရင် Click Here 2.00 MB
44 အမေ့ရုပ်ရည် စိုင်းထီးစိုင် Click Here 2.00 MB
45 ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမှီ ဇော်ဝမ်း Click Here 2.00 MB
46 အခမဲ့ ခင်သီတာခိုင် Click Here 2.00 MB
47 သူစိမ်းတစ်ယောက် မျိုးကြီး Click Here 2.00 MB
48 မလာပါနဲ့ မျိုးကြီး Click Here 2.00 MB
49 အမေ မျိုးကြီး Click Here 2.00 MB
50 အမေ့ပခက်လွှဲ Unknown Click Here 2.00 MB
51 ဆန်ရေ ဘိုဖြူ Click Here 2.00 MB
52 ကြာပါတယ်ကွာ Jenny ၊ စန္ဒီမြင့်လွင် Click Here 2.00 MB
53 ချစ်စရာလေးနော် ကျော်ထွဋ်ဆွေ Click Here 2.00 MB
54 ပလွေရိုး ကျော်ထွဋ်ဆွေ Click Here 2.00 MB
55 လမ်းခွဲခြင်း စန္ဒီမြင့်လွင် Click Here 2.00 MB
56 သေချာပြီလား စန္ဒီမြင့်လွင် ၊ မိုးမိုး Click Here 2.00 MB
57 သံသယ ဆင်ပေါက် Click Here 2.00 MB
58 မျက်နှာ IMP Click Here 2.00 MB
59 နေချင်တာမင်းအနား IMP Click Here 2.00 MB
60 ဝန်ခံပါ IMP Click Here 2.00 MB
61 မာယာ အဲလက်စ် ၊ ဘရိတ်ကီ Click Here 2.00 MB
62 ဂန္တဝင်ဆည်းဆာ R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
63 နောက်ဆုံးရင်ခွင် R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
64 ကောင်းကင်မေမေ ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
65 အမေ ခင်ဝမ်း Click Here 2.00 MB
66 မင်းတစ်ယောက်တည်း ဆင်ပေါက် Click Here 2.00 MB
67 နတ်သမီး ရဲလေး ၊ အစ္စဏီ Click Here 2.00 MB
68 မင်းစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် အဲလက်စ် Click Here 2.00 MB
69 ဘေဘီ...ဂဲလ် ရဲလေး ၊ L လွန်းဝါ Click Here 2.00 MB
70 ချစ်သူရဲ့ပုံပြင် အေနွန် Click Here 2.00 MB
71 မေမေ ထူးအိမ်သင် Click Here 2.00 MB
72 သမီးရဲ့မေမေ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 2.00 MB
73 မဟာ အပိုင်း ( ၁ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
74 မဟာ အပိုင်း ( ၂ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
75 မဟာ အပိုင်း ( ၃ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
76 မဟာ အပိုင်း ( ၄ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
77 မဟာ အပိုင်း ( ၅ ) ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
78 ငါ့ရင်ခွင်ကို ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
79 အဝေးကကြယ် Kiki Kyaw Zaw Ft. MTD Click Here 2.00 MB
80 နင်လိုအပ်ခဲ့ရင် နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
81 မချစ်သီချင်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.00 MB
82 ငါ့နတ်သမီး Unknown Click Here 2.00 MB
83 အတူရှိမယ့်နေ့ ရွှေထူး ၊ အိမြတ် Click Here 2.00 MB
84 ဒီနှစ်ဆောင်း ဆုန်သင်းပါရ် Click Here 2.00 MB
85 တစ်နေ့မှာ လွှမ်းပိုင် ၊ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း Click Here 2.00 MB
86 ပျော်ပါစေ လှိုင်ဦးမော် Click Here 2.00 MB
87 အိမ် ဟန်ထွန်း ၊ တင်ဇာမော် Click Here 2.00 MB
88 တစ်စက္ကန့် R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
89 ကိုယ့်အနားရှိစေချင် R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
90 ဘဝတစ်ကွေ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ၊ ကောင်းကောင်း ၊ မြင့်မြတ် Click Here 2.00 MB
91 အထီးကျန် ရွှေထူး Click Here 2.00 MB
92 အချစ်အိပ်မက် ရဲရင့်အောင် ၊ သားသား Click Here 2.00 MB
93 အမုန်းဒိုင်ယာရီ ရဲရင့်အောင် ၊ သားသား Click Here 2.00 MB
94 My Girl ရဲရင့်အောင် ၊ သားသား Click Here 2.00 MB
95 မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
96 လွမ်းနေပါတယ် လှိုင်ဦးမော် Click Here 2.00 MB
97 မျှော်လင့်နေမယ် R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
98 နေပါစေချစ်လို့ ထူးအယ်လင်း Click Here 2.00 MB
99 သူငယ်ချင်းအတွက် ကောင်းကောင်း Click Here 2.00 MB
100 သုညဘဝ ကောင်းကောင်း Click Here 2.00 MB
101 အဲသလောက်တောင်ချစ်ရသည် ဇော်ပိုင် ၊ မေခလာ Click Here 2.00 MB
102 အရူးတစ်ယောက်ပါ ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
103 ဟိုးအဝေးဆုံး HML Click Here 2.00 MB
104 အချစ်ဆုံးလို့ ခေါ်နိုင်မလား နီနီခင်ဇော် Click Here 2.00 MB
105 အသစ်က ပြန်စ ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
106 နားလည်မှု လင်းလင်း ၊ ချစ်သုဝေ Click Here 2.00 MB
107 ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့အိပ်မက် မျိုးကြီး Click Here 2.00 MB
108 စိတ်ကူးယဉ်ချစ်သူ သားသား Click Here 2.00 MB
109 အချိန်လွန်ငှက် အောင်လ Click Here 2.00 MB
110 ဆုတောင်း ဒိုးလုံး Click Here 2.00 MB
111 မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင် အငဲ Click Here 2.00 MB
112 မရဲ့အနား မြတ်သူ ၊ MC သူရိန် Click Here 2.00 MB
113 တစ်သက်စာ ဆုံသင်းပါရ် Click Here 2.00 MB
114 ချစ်သူ ဆုံသင်းပါရ် Click Here 2.00 MB
115 ပထမအနမ်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ ရဲလေး Click Here 2.00 MB
116 တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ် ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.00 MB
117 ဝိုင်းဝိုင်းလည် သားသား Click Here 2.00 MB
118 ချစ်သူ ရဲလေး Click Here 2.00 MB
119 SWAG ရဲလေး Click Here 2.00 MB
120 ရူးချင်ယောင်ဆောင်မနေနဲ့ လေးဖြူ Click Here 1.16 MB
121 ဒယ်ဒီဟဲလေး ဟဲလေး Click Here 1.00 MB
122 တစ်နယ်စီခွဲနိူင်မှာလား အာဇာနည်၊ဆုန်သင်းပါ Click Here 1.09 MB
123 ရွှေမြန်မာ အကော်ဒီယံအုန်းကျော် Click Here 2.00 MB
124 ရေခဲရိုက်အပြုံး မိစန္ဒီ Click Here 2.00 MB
125 အရူးပုံပြင် snare(feat-saisai ) Click Here 2.00 MB
126 နေနိူင်လို့လား ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
127 ပွဲ bobbysoxer Click Here 2.00 MB
128 အမှတ်တရညနေခင်း ဇေရဲ Click Here 2.00 MB
129 စွန့်သွားတော့နေခြည် ဇော်ပိုင် Click Here 2.00 MB
130 အမုန်းဖွဲ့တေး ထက်နေခြည် Click Here 2.00 MB
131 မင်းနဲ့နီးဖို့ကြိုးစား​နေတယ် idiot Click Here 2.00 MB
132 အိပ်ပျက်ည မာရဇ္ဇ Click Here 2.00 MB
133 အရေးမကြီးဘူး လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
134 အချစ်တဲ့လား ဖြူဖြူကျော်သိန်း Click Here 2.00 MB
135 ဘယ်သူမှ စည်သူလွင် Click Here 2.00 MB
136 လရိပ်ချို စိုင်းစိုင်း ကြိုးကြာ Click Here 2.00 MB
137 ကျွှန်တော်ချစ်တဲ့သူမှာ ချစ်သူရှိတယ် ကောင်းကောင်း Click Here 2.00 MB
138 ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း စိုင်းစိုင်းခမ်လှိုင် Click Here 2.00 MB
139 အမှတ်မရှိ ဖော်ကာ Click Here 2.00 MB
140 wedside ရဲနောင်/ဂျူး Click Here 2.00 MB
141 ဝေဒနာပြတင်းပေါက် အစိုင်း(black hole) Click Here 2.00 MB
142 ငါတို့ဝေး လွှမ်းပိုင် Click Here 2.00 MB
143 ဆုလဒ် IDIOTS Click Here 2.00 MB
144 အရူးအမူး ရင်ဂို Click Here 2.00 MB
145 နာခံမယ့်လူ သားကြီး Click Here 2.00 MB
146 ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့ အိမ့်ချစ် ft ကျော်ထွဋ်ဆွေ Click Here 2.00 MB
147 ကျေနပ်တယ် L လွန်းဝါ Click Here 2.00 MB
148 ပြန်လာပါတော့ လေးဖြူ Click Here 2.00 MB
149 စက္ကူလေတံခွန် အငဲ Click Here 2.00 MB
150 မိုး ရိုးရာ.၊R-ဖြိုး၊ဥာဏ်ထက် Click Here 2.00 MB